फेरि लकडाउन नगर्न डक्टरको सल्लाह – ramechhapkhabar.com
फेरि लकडाउन नगर्न डक्टरको सल्लाह
भारतका विभिन्न शहरमा लकडाउन शुरु भएसँगै नेपालमा पनि पुनः लकडाउन हुने आँकलन गरिएको छ । तर,शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले भने कोरोनाले महामारीको रुप लिए मात्र लकडाउनमा जान सुझाव दिनुभएको छ । लकडाउन दीर्घकालीन समाधान नभएको उहाँको धारणा छ ।
यसवीच भारतको विभिन्न शहरबाट गौरीफण्टा नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका एघार जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै सीमामा कडाईका साथ चेकजाँच शुरु गरिएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणको निम्ति लकडाउन दीर्घकालीन समाधान नरहेको उल्लेख गर्दै डा. पुनले स्थानीय पालिकाहरू सक्रिय भई भारतबाट आउनेको स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिनुपर्ने र कोरोना आशंकितलाई क्वारेन्टिनमा राखेर जोखिम रोक्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले कोरोनालाई पूर्णरुपमा रोकथाम गर्न नसकिए पनि यसलाई आफै सचेत हुँदै मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गरी केही हदसम्म रोकथाम गर्न सकिने उहाँको सुझाव छ ।
सीमानाबाट धेरै मानिस आवतजावत गर्ने भएकाले नाकामा कडाइ गरिनुपर्ने तर दैनिक उपभोग्य सामान आयातलाई मध्यनजर गर्दै नाका पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
गत वर्षको महामारीबाट धेरै कुरा सिकेर लकडाउनको नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । छिमेकी देशहरूमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै नेपालमा पनि यसबारे सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबैमा आग्रह गरेको छ ।